April 2019 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူတွေသိပ်မသိသေးတဲ့ အဖျားရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်များ? ? အဖျားဆိုတာဘာလဲ ?? ‘အရင်း’ရဲ့ အပေါ်ဘက်ထိပ် လို့တော့ စကားကပ်မပြောကြေးပေါ့။ အဖျားဆိုတာ လူတိုင်းဖြစ်ဖူးတဲ့ ဝေဒနာ တစ်မျိုးပါ။ Fever လို့ ခေါ်သလို Febrile illness လို့လည်းခေါ်တယ်။ Pyrexia လို့လည်း…
?နွေနေပူပူအောက်က ကိုက်နေတဲ့ ခေါင်းတွေ? တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ တောတောင် ရေမြေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ နောက်မှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေက သစ္စာရှိရှိလိုက်လာတယ်။ သီချင်းထဲကလို “အလွန်အေးတဲ့ရာသီ..အလွန်ချမ်းတဲ့ရာသီ” ဆိုပြီး ဆောင်းပီပီ မအေးခဲ့ပေမဲ့ နွေကတော့ မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကို လိုတာထက်ပို တာဝန်ကျေပြတယ်။ ပူလိုက်တဲ့…
ကိုယ်ပူကြီးလို့ 'တက်'သွား တဲ့ ကလေးတွေ အကြောင်း?
?ကိုယ်ပူကြီးလို့ ‘တက်’သွား တဲ့ ကလေးတွေ အကြောင်း? မိဘတိုင်း အကြောက်ဆုံးနဲ့ စိတ်အညစ်ဆုံးအရာက ချစ်မဝတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်မှာကိုပါပဲ။အဖျားအနာ ဆိုတာကလည်း ပန်းကလေးတွေလို နုနယ်တဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ တတွဲတွဲ မဟုတ်လား။ “ဆရာ..ကလေးက ကိုယ်ပူကြီးရင် ‘တက်’သွားတတ်တယ်” လို့…
⛳ လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ⛳ တစ်ခုခုလိုချင်ရင် တစ်ခုခုပြန်ပေးရတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ကျန်းမာအသက်ရှည်ဖို့အတွက် ဘာတွေပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲ။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် နေထိုင်စားသောက်ရမယ်။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေမဲ့အရာတွေ ရှောင်ရမယ်။ နောက်ထပ်ရော? မျှတသင့်တော်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း လုပ်ပေးရဦးမှာပေါ့။ လူတော်တော်များများဟာ…
? ဝလာလေလေ စွမ်းဆောင်မှုကျလေလေ ? ကိုဖက်တီး ဆေးခန်းထဲဝင်လာတယ်။ ‘မသွားမီက ရောက်နှင့်သည်’ဆိုတဲ့ သူ့ဗိုက်ပူလေးကို ကော့ကော့ ကော့ကော့နဲ့ ရှေ့ပစ်ပြီးတော့ပေါ့။ ဝဝတုတ်တုတ် ဖတ်တီးပုတ်မို့ အားလုံးက ‘ဖက်တီး’လို့ ခေါ်ရင်းခေါ်ရင်း သူ့နာမည်ရင်း သူတောင် သိပ်မမှတ်မိတော့ရှာတဲ့ ‘ကိုဖက်တီး’။ ဖက်တီးတို့ရဲ့…
? သင်္ကြန်လည်ပြီး မျက်ခွံရောင်လာရင် ? ? အဖြူကတစ်မျိုး..အနီကတစ်မျိုး.. ရေစိုပျိုမေတွေရယ် အလှကတိုး.. ဒီမဏ္ဍပ်ကအလှဆုံး..ဘယ်သူလည်းပြောကြပါဦး? နွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းတွေက ရိုးရာမပျက် ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ အရင်ရောက်လာမယ်။ ပြီးရင်တော့ တစ်နှစ်လုံးစောင့်ခဲ့ရတဲ့ ပျော်စရာသင်္ကြန်နေ့ရက်တွေရောက်လာမယ်။ သင်္ကြန်မိုးလေး တစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက်နဲ့ ပိတောက်ရွှေဝါတွေပါ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ။…
စိတ်ဖိစီးမှုများက ဦးဏှောက်ကို ဖိရာဝယ် ? ‘လူတစ်ခု ပူမှုရယ်တဲ့ဆယ်ကုဋေ’ တဲ့။ ‘လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ’ တဲ့။ လူဖြစ်လာရင်တော့ ဖိစီးမှုတွေဆိုတာ မွေးကင်းစကနေ သေတဲ့အထိ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ရှိစမြဲ။ ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်။ နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက် ပြန်ပျောက်သွားလိုက်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ…
Social Media နဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ? Social Media မကောင်းကြောင်းကို Social Media ပေါ်တက်ပြောရတာလည်း သိပ်တော့မကောင်း။ နည်းနည်းတော့ အားနာစရာ။ မိန်းမချက်ကျွေးတာ ပလုပ်ပလောင်းစားရင်း မိန်းမအတင်းပြောရသလိုပဲ သိပ်တော့ သဘာဝမကျလှ။ မိန်းမဆိုတာ မရှိမကောင်းရှိမကောင်းလို့ ပြောကြေးဆို…
အတူနေခြင်း၏ ကျန်းမာရေးအာနိသင်များ ? ဟိုးကမ္ဘာဦးလူသား အာဒံ နဲ့ ဧဝဆီက ရခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအမွေက ခုထိ လူသားတွေအတွက် လတ်ဆတ်ချိုမြ ပျော်စရာကောင်းနေဆဲ။ အဆုံးမဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်သလို လူသားမျိုးနွယ်တည်တံ့ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ နှစ်ဦးသား အတူနေခြင်းမှာ အိပ်ရာပေါ်က…